ALIKA ANTSOINA HOE GIZMO - ALIKA
Alika antsoina hoe Gizmo
'Gizmo dia Chihuahua mifangaro karazana . Tsy azontsika antoka hoe inona no afangaro aminy. Lehilahy milanja 11 lbs izy. Tena mavitrika sy be fitiavana izy. '
'Ity i Gizmo, 8-herinandro Afangaro Affenpinscher / Chihuahua milanja amin'ny 2 1/2 pounds. Saingy misy olona adino ny milaza aminy fa kely izy! Alika mahery tsy mataho-tody ao amin'ny vatan'ny alika kely izy. Tena mahafatifaty sy mahafatifaty ary mifampikasoka izy ... rehefa avy nifanditra tamin'ny zanako izy English Mastiff SY Schnoodle ! '
lhasa apso mifangaro amin'ny chihuahua
Gizmo the Maltais alika
Gizmo the Shiranian (Hybrid Pom / Shih Tzu) amin'ny 1 taona
Gizmo the Newfie avy amin'ny Tip Top Kennels any Canada misambotra ny hakanton'ny Newfoundland amin'ny ririnina
Gizmo the Shiba Inu alika kely eo amin'ny 3 volana sy sasany eo ho eo
Gizmo the Dogue de Bordeaux alika kely amin'ny 5 volana
Gizmo the Prazsky Krysarik avy any Holland
'Ity ny alikako, a Mifangaro Pekingese sy Poodle . Gizmo no anarany ary 8 taona amin'ity sary ity izy. Tiako ho fohy ny volony ka mankany amin'ny mpanao volo iray ihany izy (hatramin'ny naha zazakely azy) isaky ny 4 herinandro amin'ny volana fahavaratra sy 6 herinandro amin'ny volana ririnina. Fony mbola tanora nandehandeha tany izy dia efa namaky boky ho azy ny zanakavavin'ny taovolo taorian'ny nialàny tany an-tsekoly mba hitazomana azy tsy hidradradradra mandra-panaoko azy. Zanaky ny renim-pianakaviana izy! Manaraka ahy na aiza na aiza izy. Tezitra aminy ny fianakaviako (ary koa ny hafa) satria hiteny zavatra aminy izy ireo na hanery azy hanao zavatra ary tsy ekeny na tsy hitany akory ny fombany tsy misy. Rehefa entiko mandeha an-tongotra izy (izay fantany fa handeha izy rehefa miteny ny teny aho) dia mila mihantona amin'ny faran'ny vavany izy. Fantatrao foana rehefa reraka izy satria lasa matory izy — na ny trano fiandrasana ao an-tranon'ny fianakaviana na ao amin'ny fandriany ao amin'ny efitranoko. Indraindray dia heveriko fa saka saka izy satria rehefa manao dia lavitra izahay dia mananika ny vozoko ary mandry eo anelanelan'ny hatoko sy ny seza. Izy no alika tsara indrindra. Samy maniry azy daholo ny olona. Entiko miasa izy ary mijanona eo anilako izy. Mijanona ao amin'ny biraoko izy mandra-pivoakako ary hanaraka ahy amin'izay alehako izy, toy ny lakaoly ihany. Na izany aza, isaky ny mitondra azy amin'ny olona aho dia milaza amiko foana fa mila braces izy noho ny manaikitra ambany azy. Lazaiko azy ireo fa izany no nahazoany zazavavy. Na aiza na aiza no itondrako azy dia manolotra vola ahy ny olona hividy azy. Tsara toetra izy. Nentiko tany amin'ny tsenambarotra izy naka ny sariny niaraka tamin'i Santa Claus ary niafara tamin'ny pejy voalohany tamin'ny Lansing State Journal izy. Tiany ny maka ny sariny. '
Gizmo the Botineana (hybrid Boston Terrier / Pekingese)
Gizmo the Kimola (hybrid Amerikanina Eskimo / Lhasa Apso) amin'ny maha alika kely anao
Gizmo 15-herinandro Alika japoney Chin , miala sasatra eo amin'ny sezalàny vaovao
Gizmo the lolo avy any Ekosy
Ity no Gizmo the Pomeranian amin'ny 8 volana.
'Ity no Gizmo biby fiompinay. Izy dia Pomeranian / Amerikanina Eskimo mix aseho eto amin'ny 5 taona. Teraka tamin'ny alin'ny Noely izy. Tena be resaka izy ary manana Fomban'ny mpanjaka aho . Fa ity mpanjaka ity dia tia mihodina amin'ny fotaka mihady kankana. YUCK !!!! Tsy fofona tsara tarehy io. '
'Ity ny ahy Fangaro Pekingese / Poodle Gizmo amin'ny faha-7 taonany. Izy no alika hendry indrindra sy tsara fitondran-tena. Mijanona eo anilako izy na aiza na aiza alehako ary rehefa tsy eo aho ary lazainao ny anarako dia manomboka mitsambikina eo am-baravarana izy miandry ahy hody. Alika fahagagana izy. Fony izy vao 13 herinandro dia nosokafan'ny saka ny masony. Lalina tokoa ilay rangotra ka nanindrona ilay solomaso. Nilaza tamiko ireo mpitsabo fa ho very tokoa ny masony raha tsy nahazo io fandidiana 4000 dolara io aho. Tsy zakako izany ka notsaboiko tamin'ny fanafody in-4 isan'andro nandritra ny herinandro teo ho eo, ary nandeha tany amin'ny mpitsabo vetivety isan'andro mba hijery izay hatsarany. Fohy ny tantara, dia niditra izy ary nody indray ny masony tamin'ny ara-dalàna. Manana alika 4 hafa madio aho ary ny Peekapoo Gizmo no hendry indrindra amin'izy rehetra. '
'Jasmine the Griffonese puppy amin'ny 10 herinandro dia tia azy rehefa miresaka aminy ianao - atsipiny avy eo amin'ny lafiny iray ny lohany, toy ny hoe manatevin-daharana ilay resaka izy. '
sary mainty sy fotsy chihuahuas
Gizmo the English Bulldog pup amin'ny 9 herinandro - 'Ity dia nalaina tamin'ny iray amin'ireo dianay isan'andro, satria tiany ny mametraka zavatra ao am-bavany fa tsy manao ny orinasany. Hitanay io hazo io ary navelanay handeha niaraka tamin'io (izay nanampy). Araka ny hitanao, dia reharehany mafy ny amin'ny tehiny vaovao. '
'Ity no Gizmo, marika mainty tsy madio Pomeranian . Izy no mpamonjy ahy Pom ary iray amin'ireo antony nitiavako ilay karazany. Aseho eto amin'ny 2 taona milanja 5 lbs.
Barbie Bea Deputy Gizmo the Yorkshire Terrier
Cockineses (Pekingese / Cocker Spaniel hybrids) King amin'ny 6 volana ary Gizmo ao anatin'ny 2 volana - samy sable sy partis fotsy. Sary natolotry ny Dakota Winds Ranch
Lisitry ny anaran'ny alika
Lisitry ny alika antsoina hoe ...
Lazao ny valin'ny Chihuahua
dane mahafinaritra afangaro amin'ny poodle
pit bull jack russell mix
shar pei mifangaro amin'ny laboratoara
alika papillon mainty sy fotsy
kilalao tariby volo amboahaolo terrier